रिभर फल्स पावरले आजदेखि आइपीओ विक्री गर्दै, कति कित्ता दिने आवेदन ? – Insurance Khabar
रिभर फल्स पावरले आजदेखि आइपीओ विक्री गर्दै, कति कित्ता दिने आवेदन ?
प्रकाशित मिति : २८ बैशाख २०७९, बुधबार ११:३९
काठमाडौं । रिभर फल्स पावर लिमिटेडले आज बैशाख २८ गतेदेखि दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आइपीओ विक्री गरेको छ । पहिलो चरणमा चैत २७ गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानियमा आइपीओ विक्री गरी बाँडफाँड समेत सम्पन्न गरिसकेको छ ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्र अर्थात् संखुवासभा जिल्लाका बासिन्दाहरुका लागि प्रतिशेयर १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको ७ करोड बराबरको ७ लाख कित्ता साधारण शेयर बाँडफाँड गरेको हो ।
कम्पनीको कर्मचारी सहित सर्बसाधारणमा प्रतिकित्ता १०० अंकित दरको २७ लाख ३० हजार कित्ता शेयर विक्री गरेको हो । कुल कित्तामध्ये २ प्रतिशत अर्थात् ५४ हजार ६०० कित्ता कर्मचारीहरुका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ३६ हजार ५०० कित्ता सामूहिक लगानीकोषमा बाँडफाँड गरिसकिएको छ । बाँकी २५ लाख ३८ हजार ९०० कित्ता शेयर भने सार्वजनिक निष्काशन गरेको हो ।
सर्वसाधारणले यो आइपीओ खरीदका लागि छिटोमा जेठ ४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् भने सो अवधिसम्म माग बमोजिम आवेदन नपरेमा भने ढिलो अवधि जेठ ११ गतेसम्म विक्री खुला हुनेछ । यस आइपीओका लागि न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म माग गर्न सक्नेछ व्यवस्था छ । आइपीओ विक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
आइपीओ निष्काशनका लागि गराएको रेटिङमा कम्पनीलाई केयर रेटिङ्ग नेपालले केयर एनपी डबल बी माइनस आईएस रेटिङ प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
आवेदकले विक्री प्रबन्धकसँगै सम्पूर्ण आस्बा सेवा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट यो आईपीओ खरीदका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । साथै मेरो शेयर सफ्टवेयर र मेरो शेयर एपको माध्यमबाट पनि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
कम्पनीले संखुवासभा जिल्लामा १० दशमलव ३० मेगावाट क्षमताको पिपुवाखोला साना जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आगामी असार मसान्तसम्म आयोजनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने योजना कम्पनीको छ ।
रिभर फल्स पावर लिमिटेडको आईपीओको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी